Kukwira Getty weMazigaro nemaZizamu paParty – Vanoda Zvinhu
ndakatanga kubata bata makumbo ake ndichimukisa ndichikwira nemuzvidya.I kissed beche rake ndikaridya kunge dessert I have to say beche rake was big zvekungomisa mboro rega. Ndakavhura magaro ake mhata kuinanzva chaiko ndichipedzisira nebeche kusvisvina matinji imika munhu akabowa. Hanzi naGetty manje , ndisvire kani , isa kani , hunza mboro kani ndatowedzera kumubata nditamba nematinji ake kusvikira akuti kudetemba chaiko achikumbira mboro. Ndakaiti bvooo ka1 kuti anyatsoinzwa ndikatanga kusvira nekumashure uchinzwa beche rakuita tuma sounds kwekurohwa rakatota kuti ta ta ta ta ta ta ta imika imi! Imi ndakamusvira nekumashure chete ndichinzwa that sound, kusvika
beche robuda hutsi musana wangu ukatanga kupisa, handizivi kuti akatunda kangani I lost count. Ndakatundira on her back zvangu huronyo hukazara on her back then quickly left ndikabva ndaenda kumba kwangu.
This always works guys to keep the interest levels high usangorare kumba kwemusikana ne first day! Akasara akuita mubvunzo akafona achiti asi handina kukufadza here, I was like it’s not that babes I had stuff to do! Akabva ati saka ndokuona rinhi?? Keep her guessing and make her think she hasn’t done enough it’s a bait for women they will have guilty conscience and try harder!!
Kukwira naHwindi Mukombi
Next story Ndakamusejusa ndokumudzidzisa kuti mukadzi anosvirwa sei
Previous story Ndakasvirana neMukomana Wangu Ndikaona Nyenyedzi !